यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् महिला हिंसा र यसको कारण
नोभेम्बर 26, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	डा. राम बहादुर बोहरा, महिला, हिंसा
महिला हिंसा रोक्नमा सवैभन्दा बढी कमजोरी सरकारको र स्वयं महिलाको देखिन्छ । यस्ता विषयमा हरेक महिलाले महिलालाई हेर्ने तरिकालाई सुधार गर्दै अघि बढ्न सके मलाई लाग्छ महिला हिंसा कम हुन सक्छ । एउटा महिलाले अर्को महिलामाथि भएको हिंसा मुखदर्शक बनेर हेर्ने परिपाटीलाई जबसम्म हटाउन सकिदैन तबसम्म यो सिलसिला अझ बढ्ने देखिन्छ ।
एउटा महिलालाई कसैले गलत तरिकाले हेर्ने साहस गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जसले देख्छ बुलन्द प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ र मात्र यो समस्या हल हुन सक्छ । आज हरेक महिला अधिकांश राजनीति हिंसाको सिकार भएको देखिन्छ । युवतीहरूलाई छोटो कपडा लगाउन सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन सकेमा यसले पनि यो घट्नामा केहि सुधार आउने देखिन्छ ।
आज नेपालमा खुला सिमानाले पनि महिला हिंसा बढाएको छ । जाड, रक्सी, वियरमा खाने समय र स्केल तोक्ने र रक्सी खानेलाई परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन सके यस्ता घटना नहुने हाम्रो विचार छ । फेसबुक र चेटिङ्गले महिलामाथि हुने हिंसा बढाएको त छैन भन्ने कुरा बुझ्न आवस्यक छ । समयमा यस्ता विषयमा ध्यान दिन सके ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ ।
एकपटक राती मलाई अज्ञात फोन आयो लेडिजको मसिनो आवाज थियो हजुर आउछु भनेर किन आउनु भएन आक्रोश पोख्दै थिइन मैले हजुरले रंग नम्बर हान्नु भयो भनेपछि सरी भन्दै फोन राखिन । दुरसंचार पनि अछुतो रहेन गल्ती पुरूषको मात्रै छैन अपरचित व्यक्तिसंग सरोकार राख्ने महिला पनि दोषी छन् यसतर्फ हामीले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा बलात्कार किन बढ्दैछ ?
महिला सशक्तीकर‌णको आवश्यकता
← के हामीले दाँतले आफ्नै चिहान खनिरहेका छैनौ ?
कस्ता रोगीले के खाने ? →
अगस्ट 28, 2019 अगस्ट 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
अगस्ट 9, 2019 अगस्ट 9, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
मार्च 26, 2019 मार्च 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2